Data protection policy | မြန်မာနိုင်ငံရှိဘော့ရှ်
Data protection policy of Robert Bosch (SEA) Pte Ltd
၁။ ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးမူဝါဒအကြောင်း
Robert Bosch (South East Asia) Pte. Ltd. နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဆက်နွယ်လျက် ရှိသော ကုမ္ပဏီများနှင့် ယင်းတို့၏အထောက်အပံ့များဖြစ်ကြသော (‘Robert Bosch Singapore’၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ သင်တို့ အစရှိသည်ဖြင့်) အားလုံးတို့၏ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်မှာ လွန်စွာအရေးပါလှသည်။ ထို့ကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား သတင်းအချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုဆိုင်ရာ စုပေါင်းအသင်းအဖွဲ့မူဝါဒတစ်ရပ်ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ဆိုသည်မှာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် မိမိနှင့် ပတ်သက် ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကို အတည်ပြု ထောက်ခံ ပေးခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်၊ အိမ်လိပ်စာ)
ဤ ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒတွင် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို စုဆောင်းပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့က ဆောင်ရွက်ပေးမည့် လုပ်ငန်းများ အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့စီစဉ်ထားရှိပုံကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တွင် တတိယအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များကို ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။ ယင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသည် ယင်းပုဂ္ဂလိကမူဝါဒကို လွှမ်းမိုးမှုမရှိပါ။ (ကျေးဇူးပြု၍ ယင်း ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မည်သို့စီစဉ်ထားရှိပုံကို ကြည့်ရှုပါ။)
ဤပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒတွင်လုပ်သားစုဆောင်းခြင်း၊ လူသားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲ ခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းရေးရာ လုပ်သားဟောင်းကိစ္စရပ်များ မပါဝင်ပါ။ ဤ ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးမူဝါဒအရ လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို သိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ERROR: No link has been specified! သို့ ဆက်သွယ်နိုင် ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့က သင့်ထံ မိတ္တူကူး၍ ပို့ပေးပါမည်။
၂။ ပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးမူဝါဒကို အသုံးပြုပုံ
ဤမူဝါဒကို အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်စေရန် ရေးဆွဲထားပါသည်။ အသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒကို အစအဆုံး ဖတ်ရှုလေ့လာကြရန်လည်း ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်နှင့်သက်ဆိုင်ဆက်နွယ်သည့် အချက်အလက်ကို အောက်ဖော်ပြပါ လင့် (link) များမှ တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်ပါသည်။
အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်များအတွက် here ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းပုံ here ၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖျက်သိမ်းပုံ here ၊ ပြင်ပသို့ လွှဲပြောင်းပုံ here တို့ကို အောက်ပါ လင့် (link) များမှတစ်ဆင့် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
သင်နှင့်သက်ဆိုင်ဆက်နွယ်သည့် အချက်အလက်ကို သိရှိနိုင်ရန် အောက်ပါတို့ကို နှိပ်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ပေးသွင်းသူများနှင့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆက် အသွယ် (business partners, suppliers and other business contacts)
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသူများ (users of our online service)
သင်၏ ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှာဖွေရန်အောက်ပါတို့ကို နှိပ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုသင်ကပေးသောသတင်းအချက်အလက်များကန့်သတ်ခြင်း (limiting the information you provide to us)
သဘောတူညီချက်ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ခြင်း(withdrawing consent; opting out of marketing messages)
အချက်အလက်တိကျမှန်ကန်မှု (data accuracy)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုရယူခွင့်( access to personal data)
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကိုအမှန်ပြင်ဆင်ခွင့် (correction of personal data)
အဆင်မပြေမှုများကိုအကြောင်းကြားခြင်း (makingacomplain)
၃။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ပုံ
၃၊၁။ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ခြင်းဥပဒေများ၏ စံနှုန်း
အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံအချို့တွင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာကာကွယ်ခြင်းဥပဒေ ယခုတိုင် မရှိသေးပါ။ ဤကဲ့သို့နိုင်ငံများတွင် သင်နေထိုင်လျက်ရှိပါက ဤပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒသည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ခြင်းဥပဒေကဲ့သို့ အကာအကွယ် ပေးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အချို့သော အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ခြင်း ဥပဒေသည် အခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများနှင့် ကွဲပြားခြားနားလျက်ရှိပါသည်။ ယေဘုယျ အားဖြင့် ဤပုဂ္ဂလိက လုံခြုံရေးမူဝါဒသည် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ခြင်းဥပဒေများ၏
စံနှုန်းသဖွယ် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
၃၊၂။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပြုစုရာတွင် ဆောင်ရွက်သည့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ
ကျွန်ုပ်တို့က သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ယူရာတွင် တိတိကျကျနှင့် တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ စုဆောင်းပါသည်။ သင့်အား အဆိုပါ ရည်ရွယ်ချက်များကို အသိပေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအဆိုပါရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဥပဒေနှင့်အညီဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း တိကျစွာ ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပြီး အချက်အလက်များကို အပို အလို မရှိစေရန် အထူး အလေးထားဆောင်ရွက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီ မှန်ကန်သောအချက်အလက်များဖြစ်စေရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုဥပဒေအရနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်၍ လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအထိသာ ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ ထိန်းသိမ်းထားသည့်အချက်အလက်များကို ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ တရားမဝင်အသုံးပြုခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပျက်ပြယ်ခြင်း အစရှိသည်တို့မှ ကာကွယ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးချင်းစီအား သာတူညီမျှ ဆက်ဆံလိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ဥပဒေကို လိုက်နာရသဖြင့် ရံဖန်ရံခါ သာတူညီမျှ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် အချက်အလက်ဆိုင်ရာ ကာကွယ်ခြင်းဥပဒေသည်သင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ မပြုလုပ်မီ သဘောတူညီမှုရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချို့သောအချက်များ ဥပမာ အရေးပေါ် အခြေအနေများဖြစ်သော အသက်အန္တရာယ်၊ ကျန်းမာရေး၊ လုံခြုံရေး စသည့် ကိစ္စရပ်များတွင် သဘောတူညီမှုရယူရန် မလိုအပ်ပါ။
အရှေ့တောင်အာရှဒေသအတွင်း မည်သည့်နေရာတွင်ဖြစ်စေ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် များကို အောက်ပါအခြေခံအချက်များအပေါ်မူတည်၍ ဥပဒေအရ ထိန်းသိမ်းထားကြပါသည်။
• ကိုယ်ရေးအချက်အလက်လုပ်ငန်းစဉ် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင်တို့ သဘောတူစာချုပ်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဥပမာ ပစ္စည်းအတွက် အာမခံပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် စာချုပ်မချုပ်ဆိုမီ သင်၏တောင်းဆိုမှုအရ ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရပ်များပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့က ဥပဒေအရ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းရပ်များ
သင်၏ကျန်းမာရေးအပါအဝင် အဓိကအရေးကြီးသည့် အကျိုးအမြတ်အတွက် အကာ အကွယ်ပြုရန်လိုအပ်ခြင်း
သင်၏အခြေခံအခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုစသည်တို့ကို လွှမ်းမိုးစေသည့် ဥပဒေဆိုင်ရာ အကျိုးအမြတ်မှတပါး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တတိယအဖွဲ့အစည်း၏ ဥပဒေဆိုင်ရာအကျိုးအမြတ် အတွက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းရပ်များ
သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းစဉ်အား သဘောတူညီချက် လိုအပ်ခြင်း
၄၊၁။ အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို စုဆောင်းခြင်း
ယေဘုယျအားဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုမည့်သူများထံမှ တိုက်ရိုက် စုဆောင်းပါသည်။ သင်ကကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းလာသည့်အခါ ဆက်သွယ်ရမည့် အချက်အလက်များအပါအဝင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်ထံ အပြန်အလှန် ဆက်သွယ် တောင်းယူပါသည်။ တခါတရံ တတိယအဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရှိကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိပါက တတိယအဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆက်သွယ်၍ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းပါသည်။ (ဥပမာ တတိယအဖွဲ့အစည်းသည် သင်၏ တောင်းဆိုချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ သင်၏အချက်အလက်များကို ပေးရန် အခွင့်ရှိသူ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအကြောင်းကို ပေးရန်အခွင့်ရှိသူဖြစ်ပါက)
ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အမျိုးအစားများသည် သင်၏ ဆက်သွယ်မှုအခြေအနေပေါ် မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းနှင့်တိုက်ရိုက်ပတ်သက်သော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပြီး လိုအပ်သည့်အချက်အလက်များကိုသာ စုဆောင်းပါသည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာများပါဝင်သည်
သင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို စတင်ဆက်သွယ်ချိန်တွင် သင်နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များကို စတင်စုဆောင်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ သင့်ထံ အကြောင်းကြားစာတို (message) ပို့ရန်၊ သင့်ကိုအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သော သတင်း အချက်အလက်များဖြစ်သည့် သင့်အမည်၊ သင်အသုံးပြုသည့်အမည် (user name)၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ လမ်း၊မြို့အမည်၊ နှင့် သင့်မိုဘိုင်းဖုံး နံပါတ်၊ IP address စသည်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော အချက်အလက်များရှိပါက
ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချိန်မရွေး အသိပေးနိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် အသေးစိတ်အတွက် here ကို နှိပ်ပါ။)
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ စီးပွားရေးဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေ သည့် သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှု အမျိုးအစား စသည့် သင် သို့မဟုတ် သင့် ကုမ္ပဏီရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကို အထောက်အကူ ပေးနိုင်မည့် အချက်အလက် သို့မဟုတ် သင်တို့ကုမ္ပဏီက လိုအပ်သည်နှင့် ကိုက်ညီသော ကျွန်ုပ်တို့ ပေးနိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက် အလက်များ၊ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်များ၊ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ (ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီထံမှ ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင် မည်မျှဝယ်ယူမည် သို့မဟုတ် မည်မျှသုံးစွဲမည် အစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင်ဖြစ်သည်။)
ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို သင် မည်မျှသုံးသနည်း ဟူသည့်သတင်းအတွက် here ကို နှိပ်ပါ။
ကုန်ပစ္စည်းမှာယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများကို မှာယူခြင်း၊ ရောင်းချခြင်းနှင့် ပံ့ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်ပါ အကြောင်းများကြောင့် စုဆောင်းသည် -
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို သင်က တောင်းဆိုသောအခါ၊ ပံ့ပိုးမှုများ (ဥပမာ ပစ္စည်းအာမခံပေးခြင်းနှင့် စျေးကွက်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများ)၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစသည်များအတွက် တောင်းဆိုသောအခါ
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးပွဲများတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ ပြိုင်ပွဲဝင်ခြင်း၊ ငွေဖြည့်ခြင်း၊ အီးမေး သို့မဟုတ် သတင်းလွှာတွင် စာရင်းသွင်းခြင်းတို့ဆောင်ရွက်သည့်အခါ အာမခံခြင်းနှင့်နည်းပညာထောက်ပံ့မှုများ
အာမခံခြင်းနှင့်နည်းပညာထောက်ပံ့မှုများတို့အတွက် သင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကိုစုဆောင်း၍ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
၄၊၄။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်မည့်အချိန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်နေသည့် သတင်းအချက် အလက်များကို ငွေကြေးဖြင့် လဲလှယ်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် သင့်သတင်း
မိမိတို့လက်အောက်ခံ သို့မဟုတ် ဆက်နွယ်နေသော ကုမ္ပဏီများ၏ အမျိုးမျိုးသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံစွာ လိုအပ်သော မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို သုံးမည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ယူသည့် လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးမည့် ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့သည့်အချိန် (ထုတ်ကုန်များကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည့်၊ စာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်၊ ဌာနတွင်း အခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှု ရည်ရွယ်ချက်များ စသည့်) ကိစ္စရပ်များတွင် ထိုကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်အတူ သဘောတူထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ကိုယ်ရေးအချက်များကို အခြား ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်အသုံးမပြုဘဲ သဘောတူညီချက်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုရန် သေချာစေရမည်။
သင်၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးလေ့ရှိသော တစ်ဦးတယောက်ထံ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုထံ ပေးရန် သင်က ပြောကြားလာသည့်အခါ
ဥပဒေကြောင်းအရသော်လည်းကောင်း၊ ဥပဒေကြောင်းအရမဟုတ်ဘဲသော်လည်းကောင်း ဖွင့်ဟ ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိရမည်။
၅။ စီးပွားဖက်များ၊ ကုန်ပေးသွင်းသူများနှင့် အခြားသောလုပ်ငန်းအဆက်အသွယ်များ
၅၊၁။ စီးပွားဖက်များ၏ ကိုယ်ရေး (သို့) ဆက်နွယ်သောအချက်အလက်များကိုရယူခြင်း
ယေဘူယျအားဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို သင့်ထံမှတိုက်ရိုက်ရယူပါသည်။ သင့်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းခြင်းကို (ဆက်သွယ်နိုင်မည့်အချက်အလက်များ(contact information) နှင့် အခြား ဆက်စပ်နေသော သတင်းအချက်အလက်များအပါအဝင်) သင်က ပြန်လည်ဖြေကြားချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ သင်က ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လုပ်ငန်းများ အကြောင်း၊ ကျသင့်မည့်တန်ဖိုးများအကြောင်းမေးမြန်းချိန်၊ သင် သို့မဟုတ် သင့်ကုမ္ပဏီနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ စီးပွားရေးဆက်နွယ်ဆောင်ရွက်မှုတည်ဆောက်နေစဉ်၊ သင် သို့မဟုတ် သင့်ကုမ္ပဏီအား ကျွန်ုပ်တို့က ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်အတွင်း ပြန်လည်ဖြေကြားမှုလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
တစ်ခါတရံ သင့်ကုမ္ပဏီတွင်အလုပ်လုပ်နေသော ကြားလူတစ်ဦးတစ်ယောက်ထံမှလည်း ယင်းအချက်အလက်များကို ရယူနိုင်သည်။ (ဥပမာ- သင့်အား သူတို့ရဲ့စီမံချက်ဝင် အသင်းသား အဖြစ် ထည့်သွင်းပေးပါက)
၅၊၂။ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းမည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အမျိုးအစား
သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားဖက်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၊ သင်သည် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး
သင့်ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်စီးပွားဖက်ဖြစ်နေခဲ့မည်ဆိုပါက သင်တို့နှင့်ပါတ်သက်သော အောက်ပါ သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားများကို ကောက်ယူမည် -
သင့်ထံ message ပို့ရန်၊ သင့်ကိုအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ ဖြစ်သည့် သင့်အမည်၊ သင်အသုံးပြုသည့်အမည် (user name)၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ ရုံးဖုံးနှင့် သင့်မိုဘိုင်းဖုံး နံပါတ်
ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသတင်းအချက် အလက်များ၊ မေးမြန်းစုံစမ်းချက်များ၊ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ (ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီထံမှ ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူခြင်း သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုချိန်တွင် သင် မည်မျှဝယ်ယူမည် သို့မဟုတ် မည်မျှသုံးစွဲမည် အစရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်များ အပါအဝင် ဖြစ်သည်။)
ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို သင် မည်မျှသုံးသနည်း ဟူသည့်သတင်းအတွက် here ကို နှိပ်ပါ။
၅၊၃။ သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ကျွန်ပ်တို့အသုံးပြုပုံ
သင် (သို့) သင့်ကုမ္ပဏီမှ တောင်းဆိုလာသော ထုတ်ကုန် (သို့) ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆက်စပ်သော ဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်သည့် ထုတ်ကုန်များ၊ အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု၊ စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှု၊ ဘဏ္ဍာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၊ ပံ့ပိုးပေးမှုနှင့်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့် သင်တို့ကုမ္ပဏီ နှင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာစေမည့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် အထောက်အကူ ပေးရန်
သင့်အားဈေးကွက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းထဲပို့ပေးရန်။ (သင်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ သိသာထင်ရှားစွာ စိတ်ဝင်စားမှုများ၊ လုပ်ငန်းသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့် တည်နေရာကို အဓိကမူတည်ပြီး ကမ်းလှမ်းသည့် ကမ်းလှမ်းချက်များအပါအဝင်)
ဆန်းစစ်လေ့လာချက်များစီမံရန်နှင့် ကြော်ငြာပွဲများလုပ်ဆောင်ရန်၊ ကမ်းလှမ်းချက်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်နှင့်သင်ကုမ္ပဏီက ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိ တွက်ချက်နိုင်ရန်
သင်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီက စိတ်ဝင်စားစေနိုင်မည့် ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီ၏ သတင်းအချက် အလက်များ ပံ့ပိုးပေးရန်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကြေညာချက်များ၊ နည်းပညာ ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များ စသည်တို့ ပါဝင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်နှင့် သင် သို့မဟုတ် သင့်ကုမ္ပဏီနှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးပြုနိုင်ရန်၊ (သင်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင် မှုများပေးပို့ခြင်း၊ ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းကိုင်ခြင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်ကုန်သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိမိတို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် (website) ကို စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီကသုံးစွဲမှုကို သရုပ်ခွဲ လေ့လာခြင်း၊ မသမာမှုများကို တားဆီးခြင်းနှင့် မိမိတို့စနစ်နှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ဆောင်ရွက်မှုများ လုံခြုံမှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အစီရင်ခံခြင်းနှင့်ဥပဒေလိုက်နာခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်း ဆက်လက် လည်ပတ်သွားနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
၅၊၄။ သင့်ကိုယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်မည့်အချိန်
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့်အချက်အလက် များကို ငွေကြေးဖြင့် လဲလှယ်မည်မဟုတ်ပါ။ အောက်ပါအခြေအနေများတွင် သင့်သတင်းအချက် အလက်များကို ဖွင့်ဟမည်။
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကောက်ယူသည့် လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကူညီပေးမည့် ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့သည့်အချိန် (ထုတ်ကုန်များကို အိမ်တိုင်ယာရောက် လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးမည့်၊ စာရင်းစစ်ဝန်ဆောင်မှုပေးမည့်၊ ဌာနတွင်း အခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှု ရည်ရွယ်ချက်များ စသည့်) ကိစ္စရပ်များတွင် ထိုကြားခံဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်အတူ သဘောတူထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း ကိုယ်ရေးအချက်များကို အခြား ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် အသုံးမပြုဘဲ သဘောတူညီချက်ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း အသုံးပြုရန် သေချာစေရမည်။
၆။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုသူများ
၆၊၁။ Cookies နှင့် အခြားသောစာရှာယန္တယားများ(tracking mechanism) ကို အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ Online ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများကို အသုံးပြုပေလိမ့်မည်။ Cookies သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်း
ဝန်ဆောင်မှုကို သင် အသုံးပြုချိန်တွင် သင့်ကွန်ပျူတာအတွင်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့် သေးငယ်သောစာသားဖိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Tracking မှာ အခြားသောနည်းပညာသုံးထားခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် Pixel နည်းပညာဖြင့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက် သို့မဟုတ် ဖိုင်မှတ်တမ်း ရေးသွင်းစဉ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ဖြစ်သည်။
Cookies သည် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏ နည်းစံနစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအရ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများ (Cookies and tracking mechanism) သည် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု၏ နည်းစံနစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းများအတွက် သတ်မှတ်ချက်များအရ မဖြစ်မနေလိုအပ်သည့်အရာမဟုတ်ပေ။ ဆိုလိုသည်မှာ Cookies and tracking machanism သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက်သာ လိုအပ်ပါသည်။
၆၊၂။ နည်းပညာအရလိုအပ်သော cookies
နည်းပညာအရလိုအပ်သော cookies ဆိုသည်မှာ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက် သေချာရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ ဗီဒီယို(video) နှင့် အော်ဒီယို (audio) တို့ကို ချောမွေ့စွာ ပြန်လည်ထုတ်ပေးနိုင်စေရန် လိုအပ်သော အချက်အလက် (data) များကို သိမ်းဆည်းပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်သည့် cookies သည် ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှ ထွက်လိုက်သည်နှင့် ဖျက်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
၆၊၃။ Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများ (Cookies and tracking mechanisms) တို့သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်မဟုတ်
ကိစ္စရပ်တိုင်းအတွက် သင်၏ဦးစားပေးရမည့်သဘောတူညီချက်ကို ပေးပို့ထားပြီးပါက Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများ (Cookies and tracking mechanisms) တို့သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက် အနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုရုံသက်သက်သာ သုံးမည်။ Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများ (Cookies and tracking mechanisms) နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
convenience cookies - အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ဆောင်ပေးပြီး ရှာဖွေရာတွင် ပိုသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေမည် (ဥပမာ- သင့်၏ဘာသာစကားအတွက် ချိန်ညှိနိုင်မှု ပါဝင်လာမည်)
marketing cookies and tracking mechanisms သည် သင်၏စိတ်ပါဝင်စားမှု အပေါ်အခြေခံ၍မှာကြားထားသောအမှာစာများ၊သင့်ထုတ်ကုန်များကိုသုံးစွဲသူများ ၏အမူအကျင့်များကို သရုပ်ခွဲလေ့လာခြင်းရလာဒ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ နှင့်တကွ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖက်များကိုပါ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းရှိစေပါသည်။
statistical tools သည် စာရင်းဇယားဆိုင်ရာ အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများကို တိုင်းတာ စစ်ဆေးနိုင်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ဈေးကွက်ကြော်ငြာကတဆင့် ဝင်ရောက်လိုက်သည်နှင့် Conversion tracking tables သည် သင့်ကွန်ပျူတာထဲသို့ ရောက်ရှိလာမည်။ (သာမာန်အားဖြင့် ရက် ၃၀ ထိသုံးနိုင်ပါသည်) ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှ စာမျက်နှာတစ်ခုခုကို ဝင်လိုက်ပြီး cookies ကလည်း အသုံးပြုခွင့်မကျော်သေးပါက ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်မိတ်ဖက်ကကြော်ငြာကို တစ်ချက်နှိပ်လိုက်(click)ရုံဖြင့် အသိအမှတ် ပြုပြီး ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလည်း ပြန်လည်ညွှန်ကြားချက်ပေးပါသည်။ (ဤနည်းဖြင့် conversion statistics ကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုနိုင်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာကို ဝင်ကြည့်သူ အရေအတွက်ကို မှတ်တမ်း သိမ်းထားရန်။)
• Social Plugin - ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု အချို့သောစာမျက်နှာများတွင် cookies ကိုသုံးသော အခြားလူမှုကွန်ရက်လုပ်ငန်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်သည်။ (ဥပမာ- Facebook, Twitter)
သင့် Cookies နှင့် အခြားသော စာရှာယန္တယားများ၏ဆက်တင် (Cookie and tracking mechanism setting) ကို သင်စိတ်ကြိုက် စီမံနိုင်သည်။
သင်ဆန္ဒရှိပါက cookies ကို သင့် စာရှာစာမျက်နှာဆက်တင် (browser setting) မှာ အသက်မဝင်အောင် လုပ်ထားနိုင်သည်။ (သို့သော် ဝက်ဘ်ဆိုက်၏အချို့သော လုပ်ဆောင်ချက် များကို သုံး၍မရနိုင်ပေ။)
သင် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲ ဝင်ရောက်လိုက်သည်နှင့် cookies က ကျွန်ုပ်တို့ convenience cookies, marketing cooking or tracking mechanisms သုံးစွဲခြင်းကို သင်သဘောတူသလားဟု မေးပါ လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဆက်တင်(setting)ထဲတွင် သဘောတူညီချက်ကို ငြင်းပယ် နိုင်သလို နောက်မှ ခွင့်ပြုချက်ပေးနိုင်သည်။
၆.၄။ Microsoft Azure ၏ အကြောင်းအရာ ပေးပို့မှုကွန်ရက်
ကျွန်ုပ်တို့ online offer တွေ ရဲ့ loading time ကို မြန်ဆန် တိကျစေရန် Azure Content Delivery Network (CDN) services ကို အသုံးပြုပါသည်။ Provider များကတော့ Microsoft Corporation , One Microsoft Way , Redmond , WA 98052-6399 ,USA and Microsoft Ireland Operations Limited , One Microsoft Place , South Country Business Park , Leopardstown ,Dublin 18 D18 ,Ireland တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
CDN ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျွန်ုတို့ရဲ့ graphics ,text or scripts လို large file တွေ ပါ၀င်တဲ့ online offer တွေရဲ့ loading time တွေကို မြန်ဆန်စေပါတယ်။
CDN service သည် article6section 1 မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျွန်ုပ် တို့ ကျင့်သုံးတဲ့ overriding legitimate ကို အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင် ပါသည်။ GPDR ကတော့ online offer များအတွက် အချိန်တိုနှင့် အကျိုးရှိစေပါသည် ။
ဒီလုပ်ငန်းစဥ် များနဲ့ personal data အချက်အလက် များကို USA သို့ ပေးပို့ပါသည်။ အချက်အလက် ကူးပြောင်းမှုလုပ်ငန်းစဥ် များသည် European data protection law ကို လိုက်နာကျင့်သုံးထားတဲ့ Microsoft ရဲ့ အာမခံ ချက်နဲ့အတူ European Standard Contractual Clauses ကို အခြေခံပြီး လုပ်ဆောင် ပါသည်။
Microsoft’s CDN service အကြောင်း အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ထပ်မံသိရှိလိုပါက၀င်ရောက် လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/.
၆၊၄။ Social Plugin
ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုထဲတွင် social plugin ဟုခေါ်သော Like, Share, Comment စသည်တို့ကို facebook, Twitter, Google+, စသည်တို့တွင် သုံးနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
သင်သည် social plugin ကို သုံးလိုက်ပါက သင့် စာရှာစာမျက်နှာ (browser) က
သင့်လျော်မည့် လူမှုကွန်ရက်၏ဆာဗာ (server)ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သော လမ်းကြောင်း ဖန်တီးလိမ့်မည်။ အကျိုးရလာဒ်မှာ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်ပေးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သင့် အင်တာနက်စာရှာစာမျက်နှာ(Internet browser)မှတဆင့် အသုံးပြုကြောင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လူမှုကွန်ရက်ဖန်တီးပေးထားသူက ထိုသတင်းအချက်အလက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း လူမှုကွန်ရက်ဆာဗာတွင် သင်၏ user account မရှိသေးပါက သို့မဟုတ် user account နှင့် မဝင်ရသေးချိန်တွင် ယင်းမှတ်တမ်းဖိုင်ကို သင့် အင်တာနက်စာရှာစာမျက်နှာ (Internet browser) က သင့်တော်မည့် လူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ (social network provider) ထံတိုက်ရိုက်ပေးပို့ပြီး သိမ်းဆည်း ထားမည်ဖြစ်သည်။ (ဥပမာ အမေရိကန်နိုင်ငံ အတွင်း)
Social plugin များသည် လူမှုကွန်ရက်ဖန်တီးသူ (standalone social network)၏ ချဲ့ထွင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်စုဆောင်းသိမ်းဆည်းမှု အပေါ် ဩဇာလွှမ်းမိုးမှု ရှိနိုင်သည်။
လူမှုကွန်ရက်က အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် နယ်ပယ်အရ ယင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းသာမက သင့်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် များဖြစ်သော သက်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့် ဆက်တင်ရွေးချယ်ခွင့် (setting option) တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ လူမှုကွန်ရက်၏အချက်အလက်ကာကွယ်ခြင်း ကြေငြာချက်တွင် သင်တွေ့ရှိနိုင်မည်။
ယင်းအချက်အလက်များကိုလူမှုကွန်ရက်ဖန်တီးသူအား မသုံးစေလိုပါက အဆိုပါ social plugin များကို သင်မသုံးပါနှင့်။ တနည်းအားဖြင့် like, share, comment နဲ့ အလားတူများကို သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မသုံး ပါနှင့်။
Heise Medien GmbH & Co. KG က ထောက်ပံ့ပေးထားသော နှစ်ကြိမ်နှိပ်ခြင်း ဖြင့်သာ ဝင်ရောက်နိုင်သော two click solution ကို သုံးထားခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို လူမှုကွန်ရက်ဖန်တီးသူက မရရှိစေအောင် ကျွန်ုပ်တို့ ကာကွယ် ပေးထားမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာမျက်နှာ (page) တွင် ပါဝင်သော plugin များသည် သက်ဆိုင်ရာ ခလုတ် (button) ကိုနှိပ်လိုက်မှသာ အသက်ဝင်လာမည် ဖြစ်သည်။
၇။ သင့်အခွင့်အရေးများ -
၇၊၁။ သင်ပေးမည့် သတင်းအချက်အလက်များကို ကန့်သတ်နိုင်ခြင်း
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးလိုခြင်းမရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပါ ဟု မေးထားလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယင်းအချက်အလက်များမရရှိသော်လည်း ရှေ့ဆက် ဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင့်ထံမှအချက်အလက် များ မရရှိပါက သင်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ထုတ်ကုန်များကို သင့်အားဆောင်ရွက် ပေးရာတွင် သင့်အတွက် အဆင်ပြေနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၇၊၂။ သဘောတူညီချက်ကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ဈေးကွက်သတင်းများကို လက်မခံခြင်း
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိပြီးနောက် အချိန်မရွေး သင့်သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ် ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်အသေးစိတ်တွင်ပါဝင်သည့် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ (click here) ကို နှိပ်၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် MyBosch Account တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီဆိုပါက ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး သင့် Account ၏ My profile ထဲတွင် မိမိ၏ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမှုများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိုက်သောအီးမေးလ်များ၏ အောက်ခြေတွင်ပါဝင်သော Unsubscribe ကိုနှိပ်ပြီး ငြင်းပယ်၍ရပါသည်။ ထိုသို့ငြင်းပယ်လိုက်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့် သင်နှင့်သင့်ကုမ္ပဏီ၏ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ သင်ဝယ်ယူသော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်နေဆဲဖြစ်သည်။
၇၊၃။ သတင်းအချက်အလက် တိကျမှန်ကန်မှု
ကိုယ်ရေးအချက်များကို ကောက်ယူရာတွင် တိကျမှန်ကန်မှု၊ အမြဲသစ်လွင်နေမှုနှင့် ပြည့်စုံမှု ရှိစေရန် အဆင့်လိုက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သင့်အချက်အလက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုရှိတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ အသိပေးပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အချက်အလက်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ အမြဲသစ်လွင်နေစေရန် (Update) လုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် MyBosch Account တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီဆိုပါက ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး သင့် Account ၏ My profile ထဲတွင် မိမိ၏ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမှုများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိုက်သော အီးမေးလ်များ၏ အောက်ခြေတွင်ပါဝင်သော Unsubscribe ကို နှိပ်ပြီး ငြင်းပယ်၍ရပါသည်။
၇၊၄။ ကိုယ်ရေးအချက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း
မိတ္တူကို သင်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သော ၁၂ လအတွင်း အသုံးပြုခဲ့သော၊ ဖွင့်ဟ ကြေငြာပေးခဲ့သော သတင်းအချက်အလက်များကိုလည်း ပေးပို့ပေးနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် MyBosch Account တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီဆိုပါက Account သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး My Products (ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်) My order (ကျွန်ုပ်တို့ကုန်အမှာစာ) ကဏ္ဍကိုဝင်၍ သင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝယ်ယူသောထုတ်ကုန်နှင့် မှာယူသောကုန်အကြောင်း သိရှိရန်သက်သက် အသုံးပြုထားသည်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက် အသေးစိတ်တွင်ပါဝင်သော ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ (click here) ကိုနှိပ်၍လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် သင် ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန်လိုအပ်ချက်များကို သင့်ထံမှ တောင်းခံလိမ့်မည်။ သင်မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှ သင့်တောင်းဆိုချက်များကို ပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်တောင်းဆိုချက်ကို ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက သင့်ထံ အကြောင်းကြားစာ ပေးပို့ပြန်ကြား ပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် အခကြေးငွေကောက်ခံနိုင်သော အခွင့်အရေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားပါသည်။ ကျသင့်ငွေကို သင့်အား ကြိုတင်အသိပေးပါလိမ့်မည်။
၇၊၅။ ကိုယ်ရေးအချက်များကို ပြင်ဆင်ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားသော (သို့) ကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်ထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များမှ အမှားများကိုပြင်ဆင်ရန်၊ မလိုအပ်သည်များကို ဖယ်ရှားပစ်ရန် သင် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့် ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် MyBosch Account တွင် မှတ်ပုံတင်ပြီးသွားပြီဆိုပါက ဝင်ရောက်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပြီး သင့် Account ၏ My profile ထဲတွင် မိမိ၏ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမှုများကို ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်အသေးစိတ်တွင်ပါဝင်သော ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ (click here) ကို နှိပ်၍ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ သင့်တောင်းဆိုမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် သင် ဟုတ်/မဟုတ် စစ်ဆေးအတည်ပြုရန် လိုအပ်ချက်များကို သင့်ထံမှတောင်းခံလိမ့်မည်။ သင်မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုပြီးမှ သင့်တောင်းဆိုချက်များကို ပြန်ကြားပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပြင်ဆင်ပြီးသား သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ယခင်ပေးပို့ထားပြီးသူများထံသို့ ပေးပို့ပေးမည် ဖြစ်သည်။
၈။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက် လုံခြုံရေး
ကမ္ဘာအနှံ့ နည်းပညာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးရာတွင် ဦးဆောင်နေသည့်အားလျော်စွာ
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များလုံခြုံရေးကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အလေးအနက်ထားပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တရားဝင်မဟုတ်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြောင်းလဲ ပစ်ခြင်း၊ ဖွင့်ဟကြေငြာခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့ခြင်း၊ မမျှော်လင့်ဘဲ အချက်အလက်များပျောက်ဆုံးခြင်း စသည်တို့မဖြစ်အောင် တားဆီးကာကွယ်နိုင်မည့် လုံခြုံရေး စနစ်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အနေနှင့် သိလို ကြသောအေးဂျင့်များ၊ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အခြားသောကြားခံအဖွဲ့များ ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုမှုကို ကန့်သတ်ထားပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ညွှန်ကြားမှုအရသာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သံသယဖြစ်ဖွယ် မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်ချိုးဖောက်မှုမျိုးကိုမဆို ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်များ သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သင့်ထံလည်း အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်သည်။ ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ကန်ထရိုက်စာချုပ်အရ သော်လည်းကောင်း လိုအပ်မည်ဆိုပါက ဤကိစ္စကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရန် အကြံပေးနိုင်သည့် မည်သည့်တာဝန်ရှိသူများကိုမဆို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
၉။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဖယ်ရှားခြင်း
ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များသည် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ဥပဒေ စသည့် ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် မလိုအပ်တော့ဟုလည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်းမရှိတော့ ဟုလည်းကောင်း ယူဆနိုင်သောအကြောင်းရှိလာပါက ယင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည့်ဖိုင်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်မဟုတ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့် အဆိုပါအချက်အလက်များကို အမည် ဖော်ပြခြင်း မပြုတော့ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်နှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမည် မဟုတ်တော့ပါ။
၁၀။ ပြည်ပသို့ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များလွှဲပြောင်းခြင်း
သင်က ကျွန်ုပ်တို့ထံ သို့မဟုတ် လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီထံ သို့မဟုတ် ဆက်နွယ်သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုခုထံသို့ ပေးထားသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြေအနေအရ အခြားသော တိုင်းပြည်များသို့ မူရင်း သို့မဟုတ် မိတ္တူကို ပေးပို့ရန် မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါသည်။ (ဥပမာ စင်ကာပူနိုင်ငံပြင်ပတွင် သင်ပေးခဲ့သော ကိုယ်ရေးအချက်များကို စင်ကာပူနိုင်ငံအတွင်းရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ်သို့ ပေးပို့ရန် လိုအပ်ခဲ့ပါက)
ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒအရ သင် သို့မဟုတ် သင်နှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးအချက် အလက်များကို လက်ခံထားသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် တူညီသော အတိုင်းအတာအတိုင်း ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ခြင်းရှိသည်ကို သေချာစေရန်အတွက် သဘောတူညီချက်ကို ပြန်လည်ကြည့်ရှုပါမည်။ အာဆီယံဒေသတွင်းရှိ လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများ၊ ဆက်နွယ်နေသော ကုမ္ပဏီများအားလုံး တူညီစွာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်း (Uniform practice/Standard operating procedures) လည်းပါဝင်ပါသည်။
သင်နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကိုင်တွယ်လုပ်ဆောင် နည်းများအပေါ် အဆင်ပြေမှုမရှိဟု ယူဆပါက၊ ဥပမာ- ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်းမရှိ သို့မဟုတ် အပ်စပ်သောအချက်အလက်ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းမဟုတ်ဟု သင်ခံစားရလျှင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက်အသေးစိတ်တွင်ပါဝင်သော ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ (click here) ကို နှိပ်၍ လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များပါဝင်ရပါမည်။
သင့်ကို ခွဲခြားသိစေနိုင်သော ဆက်သွယ်ရန်အချက်အသေးစိပ် ပြည့်စုံစွာပါဝင်ရန်
သင်၏အဆင်မပြေမှုအမျိုးအစားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့် လိုရင်းတိုရှင်းဖော်ပြရန် (ဥပမာ- ဘာတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ သင်သိတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူတွေပါသလဲ)
အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့မှုကြောင့် သင့်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအကျဉ်းချုပ်
သင့်အဆင်မပြေမှုကို ပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော မည်သည့်ရလဒ်မျိုးကို သင်လိုအပ်သလဲ အဆင်မပြေမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့တွေ့ချင်း သင့်ဖော်ပြချက်ကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ စတင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပါမည်။ သင့်ထံမှ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ လိုကောင်းလိုလာပါလိမ့်မည်။ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းအားမေးမြန်းခြင်း၊ သက်ဆိုင်သောအထောက်အထားများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း၊ ဥပဒေ သို့မဟုတ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အကြံပေးခြင်းများကို ရယူပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေး ခြင်းကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ရလာဒ်ကို သင့်အားစာဖြင့်အသိပေးပါမည်။
ပုဂ္ဂလိကလုံခြုံရေးမူဝါဒနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်သတင်းအချက်လက်များလိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ သင့်ထင်မြင်ချက်များပေးပို့ရန်၊ အဆင်မပြေမှုများကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Robert Bosch (S.E.A) Pte. Ltd
ကျွန်ုပ်တို့မူဝါဒကို ပြောင်းလဲခြင်း၊ ခေတ်နှင့်လျော်ညီအောင် ပြုပြင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ အကယ်၍ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိလာပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဘ်ပေ့ချ် (webpage) တွင်တင်ပြီး အသိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တင်လိုက်သည့်အချိန်ကစ၍ မူဝါဒသည် အသက်ဝင်ပြီဖြစ်ပါသည်။